Zdeněk Zeman: चेक जरा संग इटालियन प्रशिक्षक
समाचार र समाज, सेलिब्रेटीहरू
Zdeněk Zeman - चेक जरा संग इटालियन फुटबल कोच। आफ्नो व्यक्ति चासो धेरै विशेषज्ञ जसको कोचिंग क्यारियर अन्तिम शताब्दीको लेट sixties मा सुरु, कहिल्यै एक पेशेवर स्तर मा फुटबल खेलेका छ भन्ने तथ्यलाई छ।
Zdeněk Zeman: जीवनी र जीवनको तथ्य
Zeman एक डाक्टर र एक गृहिणी को परिवार मा प्राग मई 1947 मा जन्म भएको थियो। केटा लाखौं को खेल को लागि प्रेम, तिनका मामा čestmír vycpálek, डाले Czechoslovak र इटालियन क्लब को एक नम्बर मा समय खेल्छन्।
प्राग अन्तिम शताब्दीको लेट sixties मा सैन्य सञ्चालन थिए। तसर्थ, 21 वर्षीया Zdeněk उहाँले पछि इटालियन Chiara Perricone विवाह र दोस्रो नागरिकता प्राप्त जहाँ इटाली, गर्न ू गर्न बाध्य भएको थियो। Zeman पालेर्मो को इटालियन शहर मा खेल चिकित्सा ISEF उपाधि पायो।
लामो कोचिंग लागि Zdeněk Zeman इटाली मुख्य रूप काम लगभग दुई दर्जन क्लब प्रतिस्थापित। को प्रायद्वीप विशेषज्ञ बाहिर टर्की सुपर लिग, सर्बिया र स्विट्जरल्याण्ड को शीर्ष टोली नेतृत्व।
तेह्र वर्ष Zdeněk Zeman शौकिया लिग देखि विशेष इटालियन टोली coached। "पालेर्मो" - "न्यानो-अप" यस प्रकारको पछि जवान विशेषज्ञ को सेरी ए क्लब पहिलो स्थिति प्राप्त। तर, केवल सल्लाहकार, दोस्रो टीम को भूमिका मा।
एक कोच, "Eagles" Zeman रूपमा सेवा गर्दा, रूपमा, एक वर्षको लागि ढिला भएको थियो polulyubitelsky "Licata" मार्फत जो ट्रान्जिट पछि "फगगिया" र "पर्मा" दुई धेरै बलियो सिजन बिताए - को "क्रूसेडरों" र इटालियन प्रशिक्षक संग सेरी बी मा दुई सबै हल्ला धेरै, preseason खेल नै पराजित मैड्रिड "रियल" गरेको र मौसम को पाठ्यक्रम - "मिलान" - इटाली को शीर्षक लागि कप मुख्य दावेदार बाहिर तोडने।
खैर, "फगगिया" Zdeněk Zeman भन्दा बढी पटक फिर्ता र अन्तिम शताब्दीको प्रारम्भिक 90-एँ मा क्लब5लगातार वर्ष पकड हुनेछ। यति लामो समय चेक जरा, अघि वा ढिलाइ लामो पछि त साथ इटालियन। "फगगिया" Zeman उज्ज्वल, लापरवाह, आक्रमण जो कसैलाई एक युवा, अज्ञात खेलाडीहरू खेल्छ फुटबल, सम्झना, त्यसैले लामो पहिले, बाहिर सेरी सी मा क्षेत्र मा यो म 4-3-3 कोच प्रेम र त्यसपछि सबै क्लबहरू मा अभ्यास भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ, उहाँले coached।
यसलाई अन्य कुराहरु, Zeman समय देखि तालिम समय र इटालियन शीर्ष क्लब गर्न भएको छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। तसर्थ, इटालियन विशेषज्ञ टाउको कोच, "लाजियो" र "नापोलि" को रूपमा काम गरेको छ, तर यो पक्कै पनि राजधानी "रोम" को प्रशंसक छ लामो यस Zdeněk Zeman सम्झना हुनेछ। फोटो कोच बारम्बार हुनत उहाँले कुनै ट्राफियों राजधानी क्लब संग जीत थिएन, क्लब संग्रहालय "ब्वाँसा" मा भेट भएको छ। जस्तै, तर, त्यो, र आफ्नो अन्य आदेशहरू संग जीत भएन। Zeman धेरै फरक गुणहरू मा प्रशंसक लागि ठूलो सहानुभूति चासो जगायो।
इटाली बाहिर कोचिंग क्यारियर
इटालियन प्रायद्वीप बाहिर चेक "fenerbahce", "Crvena zvezda" र "Lugano" coached। तुरुन्तै यो कोच मा इटाली बाहिर काम गरिरहेको छैन काम गर्ने छ, र सबै तीन अवस्थामा यो काम भएको छैन, र वर्ष उल्लेख गर्नुपर्छ। टर्की र सर्बिया र सबै कोच आफ्नो नियुक्ति पछि मात्र केही महिना पछि निकाल थियो।
प्रेस सक्रिय 2016 को गर्मी मा अफवाहहरु कि रूसी च्याम्पियनशिप मा इटालियन विशेषज्ञ zasobiralsya। विशेष मा, एक लामो समय को लागि एक थिचेर प्रश्न रह्यो: "हो Zdeněk Zeman को हुनेछ" अंजी "?" अन्त मा, अफवाहहरु बस अफवाहहरु थिए, तर उहाँले चाँडै भयो टाउको कोच गुटदेखि बाहिरको व्यक्ति सेरी ए - "पेसकारा"।
प्ले को शैली
Zdeněk Zeman - फुटबल आक्रमण शक्ति को एक समर्थक। आफ्ना सबै टीम, दर्जा र शीर्ष स्तर प्रदर्शन गर्ने उपस्थिति बिना पनि कोच देखाउनुभयो उज्ज्वल लापरवाह खेल र प्रशंसक इटाली को सबै प्रेम पायो। यो दिन कोच आफ्नो मनपर्ने सामरिक योजना 4-3-3 रक्षात्मक र आक्रमण खेलाडीहरू योजना को सही संयोजन छ भनी विश्वस्त।
Zeman लामो र राम्रो प्रतिष्ठित सायद सबै भन्दा राम्रो netopovyh इटालियन टोली बीच कोच। आफ्नो "फगगिया", "क्यागलियारी" र "लेक्से" भेला पूर्ण स्टेडियमों, र भीड, हेर्न आए "Zeman टोली।"
इटालियन कोचिंग लगभग पचास वर्ष मात्र आफूलाई "शीर्ष" को कोटीमा रूपमा वर्गीकरण गर्ने कुनै व्यावसायिक लागि च्याम्पियनशिप श्रृंखला बी मा दुई, घमण्ड सक्छ लागि, नगण्य छ। तथापि, Zeman Zdeněk आज, बुढेसकालमा हुनुको, इटालियन टोली अधिकांश लागि स्वागत प्रबन्धक छ।
अभिनेता Entoni Lapalya: जीवनी, फोटो। सबैभन्दा चलचित्र र टिभी श्रृंखला
Chellini Benvenuto - प्रतिभाशाली इटालियन मूर्ति
Aleksandr Dik, अभिनेता: जीवनी र Filmography
Olesya Zhurakovskaya: जीवनी र अभिनेत्री को क्यारियर
रूसी गायक Nikita Malinin: आफ्नो जीवनी, परिवार र क्यारियर
अभिनेता Dzhim Kerri: जीवनी, Filmography। व्यक्तिगत जीवन Dzhima Kerri
मास्को, नदी ट्राम: समीक्षा र फोटो
दबाइ "Opatanol": डाक्टर को समीक्षा
फ्रान्ज बेकेनबाउर एक पौराणिक कथा हो, एक ठूलो बुबा, एक क्रिस्मेटिक नेता
खेलकुद र स्वास्थ्य
मटर। उपयोगी गुणहरू।
Gardnerella - उपचार, लक्षण, प्रसारण को तरिका।
14 दिनको लागि नुन-मुक्त आहार: मेनु व्यञ्जनहरु
चेल्याबिन्स्क मा ऐतिहासिक स्मारक र मेमोरियल्स
टाहिटी - कुन देश?
विभिन्न ब्रान्डहरु को महिला को लागि स्की प्यान्ट
हार्ड डिस्क को जुदाई - एक उद्देश्य आवश्यकता
आदमको स्याउ - यो के हो? यसको लागि के हो?